Tricone bit inoshandiswa zvakanyanya kutenderera, inonyanya kushandiswa kuchera maburi makuru uye maburi ekugadzira mumakomba makuru, migodhi yakavhurika, kucherwa peturu, uye mimwe minda. Kune mapoka maviri makuru anotenderera anochera: (1) rotary kupwanya neiyo yepamusoro-poindi kurodha padombo kubva kumatatu macones, uye ...
1. Vanotyaira vanofanirwa kuve vakadzidziswa uye vane ruzivo rwebasa vasati vatora mabasa avo; 2. Anoshanda rig anofanira kugona mashandiro akakosha uye ruzivo rwakakwana rwekuchengetedza rwekuchera rig, uye ave neruzivo rwakakura mukugadzirisa matambudziko. 3. Isati yatumirwa ...
Kune avhareji yematsime anodzika, kuchera kwechitubu chemvura yekuchera haisi chinhu kunze kwekukurumidza kutsvaga chinzvimbo chekuchera huwandu hwakawanda hwemvura. Kana paine ruzivo rwakakwana, zvinokwanisika kuti tsime racho rigocherwa pasina mvura. Saka ungawana sei mvura zvinoenderana nechara ...
Peru, yechipiri inogadzira mhangura munyika, ine purojekiti yemakumi matanhatu emabasa ekutsvaga kwemigodhi, ayo gumi nemana ari emhangura. BNamericas inopa pfupiso yemapurojekiti mashanu emhangura akakosha, izvo zvinoda kudyidzana kwakabatana kweUS $ 120mn. PAMPA NEGRA Iyi US ...
Dth Nyundo Bit Mutengo, Rori Yakakwira Mvura Tsime Kuchera Rig, Mvura Well Drilling Rig Machine, Dhiziri Mhepo Compressor, Hydraulic Mvura Tsime Kuchera Rig, 6 Dth Nyundo,